Sida loogu daro jawaabaha otomaatiga ah ee ku jira Android Auto | Androidsis
Sida loogu daro jawaabaha otomaatiga ah ee ku jira Android Auto
Dad badan ayaa adeegsada barnaamijka 'Auto Auto' inaad adeegsato barnaamijyada aasaasiga u ah Khariidadaha Google, Waze ama xitaa muusig garaac adigoon indhaha ka saarin wadada. Codsiga waxaad ku maamuli kartaa wax kasta oo la xiriira barnaamijyada ugu isticmaalka badan, oo ay ku jiraan macaamiisha farriinta.
Waxaa jira ikhtiyaarro badan oo gudaha ah oo ah aaladdan caanka ah ee kor u dhaaftay 1.000 milyan oo soo degsiimo ah tan iyo markii la dhigay Play Store. Sidoo kale haddii aan dooneyno inaan diirada saarno wadista, waxa ugu fiican ayaa ah kudar jawaabaha otomaatiga ah ee kujira Android Auto, gaar ahaan codsiyada sida WhatsApp ama Telegram.
Noocyadii ugu dambeeyay ee Android Auto, adeegsadaha ayaa awood u yeelan doona inuu jaangooyo jawaabaha otomaatiga ah, sidaa darteed way ku habboon tahay in la helo nooca la cusbooneysiiyay. Si tan loo sameeyo, ka hubi isla wax iyada oo loo marayo Play Store, raadi arjiga oo hubi in uusan jirin qof ugu dambeeya oo sugaya in la soo dejiyo.
Jawaabta otomaatiga ah waxaa lagu qeexi karaa nidaamka laftiisa farriinta "Waan wadaa, mar dambe ayaan kaa jawaabi doonaa", waxaa loo diri doonaa xiriiro gaar ah oo ku yaal buug-gacmeedkayaga. Codsiga asal ahaan wuxuu dhigayaa farriintan, laakiin waxaan u beddeli karnaa mid kale haddii aan dooneyno farriin shakhsi ahaaneed markaan helno wicitaan ama helno farriimo.
Way ku habboon tahay inaad dhaqaajiso markasta oo aad wadid waddo si looga fogaado inaad indhahaaga ka saarto wadada sida ku dhacda barnaamijyada kale. Awoodda 'Auto Auto' waxay u joojisaa ikhtiyaarka in qofku fursad u leeyahay inuu dhaqaajiyo ama ka hawlgeliyo markasta oo uu doono.
Si aad udhaqaajiso jawaabaha otomaatiga ee 'Auto Auto' waa inaad sameysaa waxyaabaha soo socda:
Soo gal xulashada Dejinta iyo hel "Farriimaha"
Hadda geli xulashooyinka "Jawaabta otomaatiga ah", halkan waxaad ku hagaajin kartaa kuwa horay loo sii qeexay ama waxaad ku hagaajin kartaa nooca gacanta, waxaad ku qori kartaa fariinta qofka kale gaari doonta, ama qoraal gaaban ama wax ka dheer sidii caadiga ahayd
Waxaa ugufiican in lagu qeexo fariintaas jawaabta oo qoraal kale lagu qoro, ku darida taabashadaada si aadan ugu muuqan qabow sida "Waan wadaa, mar dambe ayaan ku soo wici doonaa." Waxaad awoodi doontaa inaad bedesho fariinta markasta oo aad rabto, xitaa waad badbaadin kartaa kuwii hore hadaadan rabin inaad lumiso.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Codsiyada Android » Sida loogu daro jawaabaha otomaatiga ah ee ku jira Android Auto
Sida loo rinjiyeeyo bushimaha ama loo qurxiyo wejigaaga Zoom: ugubnimada weyn ee barnaamijka wicitaanka fiidiyaha
HTC Wildfire E Lite waa qaab-hoosaad hoose oo cusub oo wata Android 10 Go Edition